हामी यस्तै त हो नि ब्रो: कोरोनाका नाममा १२ सत्ताइस् आतङ्क – बाह्रथरी कुरा
नेपालीहरु संसारकै बहादुर, मायालु, दयालु, नरम स्वभाव, सहयोगी ह्यान त्यान भन्दै बर्षौंदेखि सुन्दै रट्दै आइयो। तर नेपालीका बारे कुरा गर्दा व्यवसायका नाममा, स्वयम्‌सेवी संस्था खोलेर वा अनेक नाममा ठग्ने, रक्सी पिएर होहल्ला गर्ने, जथाभावी फोहोर गर्दै हिँड्ने भन्ने परिचय चाहिँ लुकेको लुक्यै। समयलाई पर्खिन सक्नुपर्छ, सबको असलियत बाहिर आउँछ एकदिन भन्थे। हो रै’छ। यसपाली कोरोना भाइरसले नेपालीको असली परिचय देखाइदिएको छ। यो लेखमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै विभिन्न ठाउँका स्थानीय सरकारले जारी गरेका सूचना र निर्देशनलाई यहाँ राख्ने जमर्को गरिएको छ। यसबारे लामो लेख्नु जरुरी पनि हुँदैन। सूचनाले नै सबै कुरा बोल्छन्। यस्ता धेरै सूचना, निर्देशन, विज्ञप्तिहरु होलान् जसले मानवियताको खिल्ली उँडाएका छन्। तर हामीले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय दिन नपाएर त्यस्ता धेरै सूचना संकलन गर्न नसकेका पनि हौंला। यहाँ जति भेटिएका र हालिएका छन्, तिनले हामीलाई मानव भएकोमा नै लज्जाबोध गराउने प्रकारका छन्।
हुँदा हुँदा कोरोनाका बिरामीहरु आइसोलेसनबाट भागे खोजी गर्ने प्रहरीले गोली हान्न सक्ने अनुमति नै दिए पर्साका प्रजिअ विष्णु कुमार कार्कीले। हो, कोरोनाको संक्रमण एकजनामा देखियो र उसले सावधानी अपनाएन भने त्यसले पुरै समुदाय, समाज र देश नै आक्रान्त बन्छ। तर, त्यसो भन्दैमा संक्रमितलाई अपराधि स्व:सरह मान्ने, उसले जानीजानी आफूमा संक्रमण सारेको र समाजमा फैलाउन खोजेको ठान्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो त छँदैछ, यो मानवाता विरुद्धको निकृष्ठ अपराध पनि हो। हामीले (जनता, सरकार, सरकारी निकाय, संस्था सबैले) कोरोना भाइरसलाई अपराधी ठान्नुपर्ने तर संक्रमितलाई अपराधीको व्यवहार गरिरहेका छौं। त्यसैको कारण हो, संक्रमित आइसोलेसनबाट भाग्न खोज्छन्, चेक जाँचका लागि जान खोज्दैनन्, क्वारेन्टिनमा बस्न मान्दैनन्। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले यसबारेमा जनचेतना फैलाउन सकेको देखिँदैन।
अनि सबैभन्दा सजिलो कुटेर, थुनेर, पुल बन्द गरेर, बाटो भत्काएर, गौंडा थुनेर मान्छे रोक्न खोजिएको छ। लामो गन्थन नगरौं। आउनुस् सूचना पढौं।
सबैभन्दा पहिला शुरु गरौं दाङ्बाट-
यो विज्ञप्ति गज्जब छ। दाङमा एउटा कोरोना विशेष अस्पताल रहेछ। र, ‘बर्दिया जिल्लाका संक्रमितलाई उपचारको लागि कोरोना विशेष अस्पताल दाङ लानु दाङ् जिल्लाबासीको अपहेलना’ हो रे। दाङको अस्पतालमा दाङ् जिल्लाका मात्रै बिरामी राख्नुपरो भन्ने अध्यक्षज्यूको माग रहेछ। भोलि कथम्‌कदाचित दाङ्मा कोरोनाका संक्रमित बढे र त्यहाँको अस्पतालले धानेन भने अध्यक्षज्यूले हाम्रा जिल्लाका बिरामी बाहिर लान पाइन्नँ भनेर नि विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ होला?
अर्को अत्यन्त आपत्तिजनक सूचना छ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ६ को। पहिला सूचना पढौं-
यो सूचना पढ्नुस् त। भाडामा बसेका अहिले बाहिर भएका मान्छेलाई प्रवेश नदिइने। घर नै शिल गर्दिने। अनि भाडावाल संक्रमित भए घरबेटीलाई क्षतिपूर्ति तिराइने। अनि वडा अध्यक्षज्यू, भाडावाल अहिले वडा बाहिर छन् र त्यहाँ आउन नपाउने हुन् भने त्यो आउन र बस्न नपाउने घरको भाडा पनि तिर्नु नपर्ने सूचना निकाल्नुस् त। कोठामा भाडामा लिएका तर अहिले गाउँ गएका भाडावालबाट भाडा असुली गरेमा घरबेटीलाई कडा कारबाही गरिनेछ भनेर सूचना निकाल्न सक्नुहुन्छ?
वडा नम्बर ६ कै जस्तो सूचना वडा नम्बर ५ को पनि छ। तल पढ्नुस्-
यो सूचनामा पनि अहिले उपत्यका बाहिर गएका भाडावालहरुलाई फोन गरेर नफर्किन भन्ने र जबर्जस्ति आउन खोजे खबर गर्नू। खबर गर्नू भन्ने कुरो ठीक छ। फर्केर आएर कोही आफ्नो कोठामा सुरक्षित बस्छ भने किन रोक्नुपरो? क्वारेन्टिनलाई किन यति डरलाग्दो ठानिएको हो? क्वारेन्टिनमा हाल्दिन्छु भनेर धम्की दिने यार। जसले तरकारी गमलामा रोप्नुपर्छ, एक मुठो धनियाँ उमार्ने बारी छैन, भाडावाल नहुने हो भने जसको मुखमा माँड लाग्दैन तिनीहरुले भाडावाललाई यस्तो व्यवहार?
अनि आउँछ किर्तिपुर नगरपालिका। यस्तो लाग्छ, भाडामा बस्ने मानिसहरु मानिस नै होइनन्। ती वस्तु हुन्। ती दास हुन्, घरबेटीहरुका। जसलाई घरबेटीले नचाउन पाउँछन् मदारीले जमुरेलाई नचाएजस्तो। घरबेटीले आइज् भन्छ, लुरुक्क परेर आउने, घरबेटीले त्यहाँ बस् भन्छ, गएर बस्नुपर्ने। किर्तिपुर नगरपालिकाको सूचना तल पढ्नुस्-
यी सबैका बाबजुद कडा सूचना हुँदाहुँदै पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को सूचना भने निकृष्ठ नै चाहिँ छैन। यसले भनेको छ, ‘काठमाडौं बाहिर हुनुभएकोहरु यो वडामा आउनुभएको भए वडामा खबर गर्नुहोला।’ यसरी तथ्याङ्क राख्नु ठीक हो। निगरानीमा राख्नु पनि ठीक छ। वडाले क्वारेन्टिनमा बस्नुस्, बाहिर ननिस्किनुस्, निस्किनै परे सुरक्षा विधि अपनाउनुस् भन्नु गलत हैन। गर्नु पर्ने नै त्यही हो।
यस्ता टाउको दुखाउने र रीस उठाउने अनेक सूचना पढेपछि केही राम्रा कुरा पनि गरौं। यस्तो कठिन परिस्थितिमा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १५ ले एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ। यसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई राहत बाँड्नुको सट्टा उक्त परिवारका सदस्यलाई काम दिने र ज्याला दिने सूचना जारी गरेको छ। स्वाभिमानी मान्छेका लागि यो कति राम्रो कुरो। काम गर्नुस्, ज्याला लिनुस्, परिवार पाल्नुस्। स्याब्बास्। हेर्नुस् सूचना-
हामी सबैलाई थाहा छ, कोरोनाले धनी र मैं हुँ भन्ने देशहरुलाई पनि पानी भन्न दिएको छैन। यसलाई जित्न सजिलो छैन। त्यसमाथि हामीजस्ता गरीब ठानिएका देशका जनताले स्वास्थ्य सेवामा गरीब हौंला, पैसामा गरीब हौंला तर मानवियतामा, सहयोगी भावनामा, मनमा गरीब छैनौं भनेर देखाउने समय हो यो। यो भाइरसविरुद्ध आपसी सदभाव, माया र सहयोगका साथ एकजुट भएर लडौं। आफू सुरक्षित रहौँ, अरुलाई सुरक्षित रहन सहयोग गरौं। रोगीलाई होइन रोगलाई घृणा गरौं।
नोट: यसभन्दा तल अन्य केही सूचनाहरु पनि छन्। यी धेरै सूचनाहरु हामीलाई हाम्रो ट्विटर सूचनाका आधआरमा हामीसम्म ल्याइपुर्‍याइदिनु हुने सबैजनालाई हार्दिक नमन गर्दछौं। यी सभै सूचना, विज्ञप्तिहरु हामीले सामाजिक सञ्जालबाट संकलन गरेका हौं। यहाँ हामीले डकुमेन्टेसनको उद्देश्यले सबै सूचना राखेका छौं। यी सूचनाबाट हामी कुनै पनि व्यवसायिक फाइदा लिँदैनौं। त्यसैले पनि हामीले यी सूचनाको फोटोको स्रोत उल्लेख गरेका छैनौं। त्यसको लागि हार्दिकतापूर्वक क्षमायाचना गर्दछौं। यो एउटा डकुमेन्टेसन पनि हुन्छ जस्तो लागेर यति जमर्को गरियो। यहाँ छुटेका र यो पनि राख्नुपर्छ भन्ने लागेका कुनै सूचना भए हामीलाई कमेन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ।
चाँगुनारायण नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको सूचना
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर १
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर २ को सूचना
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचना। काठमाडौं त झन् विशेष हुने नै भयो। राजधानी। अनि राजधानी आउँदा हिँडेर आउने? हेप्नी? राजधानीको इज्जत धुलिसात पार्न खोज्ने? अँ, यो सूचनाको दोस्रो लाइनमा मिति हेर्नुस् है २०७६/०२/०२ 😂
रामेछाप जिल्लाको सूचना
बारा जिल्लाको सूचना
प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गामा खेति गर्ने भन्दै जथाभावी जोत्न थालेपछि विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्ति।
नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ३ इचंगु नारायणले काठमाडौं बाहिर जान चाहनेका लागि पास वितरणको लागि जारी गरेको सूचना।
This entry was posted in बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज and tagged COVID19, Inhuman, Local Government, Notice. Bookmark the permalink.